Sendikàn’ny mpirakidraharaha : “Tokony hoesorina sy hoenjehina ny minisitry ny Fitsarana” | NewsMada
Sendikàn’ny mpirakidraharaha : “Tokony hoesorina sy hoenjehina ny minisitry ny Fitsarana”
Na eo aza ny fanamboarana governemanta, mitoetra ny fijerin’ny filohan’ny sendikàn’ny mpirakidraharaha fitsarana, fa tokony hoesorina sy hoenjehina ny minisitry ny Fitsarana.
“Na misy aza ny fanerena, tsy ny minisitry ny Fitsarana no tsy hahafantatra ny amin’ny tsy tokony hanatanterahana baiko tsy ara-dalàna. Mafy noho ny nanesorana ny minisitra Anandra Norbert no tokony hanesorana ny minisitry ny Fitsarana amin’izao fotoana izao, raha ny zavatra nataony no jerena.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny Sendikàn’ny mpirakidraharaha fitsarana, Rabenandrasana Nicolas, teny Anosy, omaly, momba ny fanelanelanan’ny minisitry ny Fitsarana tamin’ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine”.
Raha nesorina ny minisitry ny Filaminam-bahoaka teo aloha tamin’ny fanambarany momba ny “Raharaha Antsakabary”: ambony noho izany ny sazy tokony homena ny minisitry ny Fitsarana. Tsy vitan’ny hoesorina fa tokony hoenjehina izy, raha ny fanazavany.
Notsabahina mialoha ny raharaha
Mbola tany amin’ny fanadihadiana savaranonando teny amin’ny Bianco ny raharaha fa tsy teny amin’ny fitsarana, nisy ny fanelanelanan’ny minisitry ny Fitsarana: nilaza fa rehefa tapitra ny 48 ora, havoaka io olona io fa tsy ara-dalàna ny fitanana azy.
Hatramin’ny naha minisitra na naha mpitsara azy, sambany nahita fanalavana ny 48 ora hitanana olona amin’ny fanadihadiana savaranonando izy tamin’iny trangan-javatra iny sa iny ihany no mahaliana azy? Hita matetika, roa herinandro tazonin’ny sasany ny olona tsy manam-bola. Tsy mbola nahaheno ny minisitry ny Fitsarana niteny ny amin’izay tokony hanaovana izany izy, raha ny nambarany.
Tsy tafaporitsaka toy iny Razaimamonjy Claudine, raha…
“Na zavatra mbola tsy eo amin’ny tena aza fa any amin’ny Bianco, efa itsabahana. Rehefa tonga eny amin’ny fitsarana ny raharaha: mazava ny tiana hatao hoe havotsotra… Izy hitantsika lasa iny. Izy hitantsika lasa iny”, hoy ity mpitarika sendikà ity.
Matoa lasa izy, raha tena hentitra ny minisitry ny Fitsarana: nilaza fa tokony harahi-maso sy hambenana tsara ny ao amin’ny famotorana. Tokony ho nanao sonia iny fandefasana azy noho ny antony fahasalamana iny ny mpitsara nanao famotorana.
Raha hentitra ny minisitry ny Fitsarana, tsy tafaporitsaka toy iny Razaimamonjy Claudine. “Matoa izy lasa, zavatra tian’ny minisitra hatao fony mbola tany amin’ny Bianco ny raharaha, any amin’ny fitanana vonjy maika amin’izay izy no manao fanelanelanana”, hoy ihany izy.